Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Aogositra 2018 à 08:24
384 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 27 Mey 2018 à 11:55 (hanova)
k (Nampiditra ny hoe κύριος)
Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Aogositra 2018 à 08:24 (hanova) (esory)
Ny [[fanekem-pinoana]] na [[Fanekem-pinoana|fiekem-pinoana]] dia fanambarànalahatsoratra natao ho tononin'ny finoanampino ampahibemaso mba hanambaràny sy hamaritany mazava ary hamintinany ny fototry ny finoany. Ny [[Jodaisma|Jiosy]] sy ny [[Kristianisma|Fiangonana kristiana]] sasany (katolika sy ortodoksa ary protestanta sasany) ary ny [[Silamo]] dia manana fanekam-pinoana.
Ny fanekem-pinoan'ny Jodaisma dia ny hoe שמע ישראל / S''hemaʿYisrâ'êl'' ("Mihainoa ry Isiraely"). Izao no voasoratra ao amin'ny ''Devarim'' (Bokin'ny Deoteronomia) ao amin'ny [[Torah]]:
Araka ny fanao jiosy dia tsy tononina fa soloana ny anarana hoe יְהוָה '''/''' YHWH rehefaamin'ny tononinafanononana ilay fanekam-pinoana, ka mety ny hoe ''HaShem'' ("Nyny Anarana") na ny hoe אֲדֹנָי / ''Adonai'' ("Tompo") na teny hafa no asolo an'io anarana io. Izany dia tsy midika hofa tsy soratana ilay anarana.
Marihina fa ao amin'ny Baiboly jiosy amin'ny fiteny grika atao hoe [[Septoaginta]] (na [[Septanta]]) dia nosoloana ny hoe ''κύριος'' / ''Kyrios'' ("Tompo") ny anaran'Andriamanitra hoe אֲדֹנָי / ''Adonai''.
Tononina isan'andro, maraina sy antoandro ary hariva ny ''Shema Israel''. Tononina koa izy eo an-dohafandrian'ny olona miala aina. Tononin'ireo tanora jiosy amin'ny fotoan'ny Bar Mitzvah (fahafenoan-taona ara-pivavahana: 13 taona). Voasoratra eny amin'ny vatakely firavaka (izay nogasina hoe ''filakitera''; hebreo: תפילין / ''tefilin''; grika: φυλακτήριον / ''phylacterion'')'','' amin'ny takela-koditra malefaka mipetaka eny amin'ny handrina sy ny sandry havia'','' araka ny toromariky ny Deoteronomia io fiekem-pinoana io. Voasoratra amin'ny takela-koditra apetaka eo amin'ny tolam-baravarana fidirana (dia ny atao hoe מזוזה / ''mezuzah'') koa izy.
Ny fiangonana kristiana dia nanana fanekam-pinoana izay mamaritra ny maha Kristiana ny olona iray. Ho an'ny Kristiana, ny fanekem-pinoana voalohany dia ny [[kerigma]], fanambaram-pinoan'ny Kristiana voalohany.
* ''I Jesosy Kristy no mesiaMesia zanakZanak'Andriamanitra'';
* ''maty sy nitsangana izy ary izay milaza izany dia mijoro ho vavolombelona amin'ny tenany manokana;''
Maro ny fanekem-pinoana kristiana fa ireto no iraisan'ny ankamaroan'ny Kristiana amin'izao fotoana izao dia ny [[Fanekem-pinoana apostolika]] sy ny [[Fanekem-pinoana nikeana|Fanekem-pinoan'i Nikea-KonstantinoplaKonstantinopoly]] ary ny [[Fanekem-pinoana atanaziana|Fanakem-pinoan'i Atanazy]]. Ny Fanekem-pinoana nikeana sy ny Fanekam-pinoana apostolika dia samy vokatrnekena tamin'ireo [[Konsily]] momba ny [[Trinite]], ka ireto avyny izyroa ireovoalohany izay fohifohy kokoa:
==== Ny Fanekem-pinoana Nikeananikeana ====
Atao hoe koa "fanekem-pinoan'i Nikea sy i Konstantinopla" io fanekem-pinoana io. Toy izao izany araka izay ampiasain'ny [[Fiangonana Loterana Malagasy]] azy:
<small>Izaho mino an'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesoa Kristy Tompo tokana, Zanaka lahi­tokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohan'ny taona rehetra: Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, Fahazavana avy amin'ny Fahazavana, Andriamanitra marina avy amin' Andriamanitra marina; nateraka Izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny Ray, ary Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra. Ary naka nofo tamin'i Maria Virjiny Izy, noho ny herin'ny Fanahy Masina, ka tonga olombelona; nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa, tamin'ny andron'i Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina ; nitsangan-ko velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, niakatra any an-danitra dia mipetraka eo an-kavanan'ny Ray; mbola ho avy amim-boninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Izaho mino ny Fanahy Masina, Tompo Loharanon'aina, avy amin'ny Ray sy ny Zanaka; tsaohina sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Izaho mino ny Eglizy, iray, masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mankatò ny [[Batisa|batemy]] tokana ho fanalana ny fahotana. Ary izaho miandry ny [[Fitsanganan-ko velona|hitsanganan'ny maty]] sy ny fiainan-ko avy. Amen.</small>
==== Ny Fanekem-pinoana Apostolikaapostolika ====
Marihina fa tsy ny fiangonana kristiana rehetra no manana fanekem-pinoana sy manaiky ireo fanakem-pinoana ireo.
'''<big>أَشْهَدُ أَنْ لْاَ إِلَـهَ إِلْاَّ ٱلله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱلله</big>''' izay tononina hoe: ''Ash-hadu an lâ illâha ill-Allâh, wa-ashhadu anna Muḥammadan Rassûlu-llâh'' sy midika hoe "mijoro vavolombelona aho fa tsy misy andriamanitra hafa afa-tsy i [[Allah]] ary mijoro vavolombelona aho fa i Mohamady no Irany"). Manamafy ny finoana ny maha tokana an'Andriamanitra ny fehezanteny voalohany: ny [[monoteisma]] izany (arabo: تَوْحيد / ''tawhîd'').
''Ash-hadu an lâ illâha ill-Allâh, wa-ashhadu anna Muḥammadan Rassûlu-llâh'' sy midika hoe:
"Mijoro vavolombelona aho fa tsy misy andriamanitra hafa afa-tsy i [[Allah]] ary mijoro vavolombelona aho fa i [[Mohamady]] no Irany".
Manamafy ny finoana ny maha tokana an'Andriamanitra ny fehezanteny voalohany: ny [[monoteisma]] izany izay atao aminn'y teny arabo hoe: تَوْحيد / ''tawhîd'').
==== Fampiasan'ny Silamo ilay fanekem-pinoana ====
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/818604"